Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Madrid Derby Ee Real Madrid v Atletico Madrid.
LINE-UPKA MACQUULKA AH:REAL MADRID
Daafaca Real Madrid Raul Albiol ayaa seegi doona kulanka caawa ee ay Santiago Bernabeu ku martigelinayaan kooxda Atletico Madrid.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Horyaalka La Liga Ee Kooxaha Barcelona v Athletic Bilbao.
Waqtiga: 10:00 p.m xilliga Soomaaliya
De Marcos, Ekiza, Amorebieta, Aurtenetxe
Herrera, Iturraspe, Muniain
Susaeta, Aduriz, Gomez
Daafaca Barcelona Dani Alves ayaa seegi doona kulanka caawa ay koodiisa la ciyaareyso Athletic Bilbao, ka dib dhaawac soo gaaray.
Alexis Sanchez, Marc Bartra iyoIsaac Cuenca ayaa dhamaantood dhaawac ku maqan, halka Adriano oo xumad ay heyso uu shaki ku jiro inuu ciyaari karo.
Athletic Bilba ayaa la filayaa inuu ka maqnaan doono daafaca midig Andoni Iraola, kaasoo dhaawac uu ka soo gaaray muruqa intii uu tababar ku jiray.
Tababare Marcelo Bielsa ayaa isbedel ku sameyn doona ciyaartoydii uu ku garaacay Ironi Kiryat Shmona ee kulankii hore u baaqday ee Europa League oo ciyaareen habeenkii arbacada ee dhawaa.
Ciyaaryahanka khadka dhexe Carlos Gurpegui ayaa weli maqan, laakiin gooldhaliye Aritz Aduriz ayaa soo laabtay ka dib ganaax hal kulan oo uu ku maqnaa.
Barcelona ayaa badisay 10 ka mid ah 11kii kulan ee u danbeysay tartamada oo dhan.
Kooxda Catalans ayaa sameyn doonta ku bilaabashadii ugu fiicneyd ee horyaalka Spain intii uu jiray 113 sannadood hadii ay guul ka gaaraan Athletic Bilbao, waxaana ay ka sarre mari doonaan rikoorkii Real Madrid ay dhigtay 1991-92.
David Villa ayaa dhaliyay goolkiisii 300aad ee mustaqbalkiisa ciyaareed kulankii ay Barca 3-1 kaga badisay Alaves ee Copa del Rey.
Athletic Bilbao ayaa badisay kaliya afar ka mid ah 16kii kulan ee u danbeysay ee tartamada oo dhan.
Los Leones ayaa laga badiyay shan kulan oo ka mid ah 7dii kulan ee ugu danbeysay ee ay la ciyaareen Barcelona oo ay ku jirto finalkii Copa del Rey.
Markii ugu danbeysay ee Athletic ay La Liga ka badiso Barcelona waxa ay aheyd May 2006 markaasoo ay 3-1 ku suul daareen
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Derby della Mole Ee Kooxaha Juventus v Torino.
Kulanka: Juventus v Torino
Waqtiga: 10:45 p.m xilliga Soomaaliya
LINE-UPKA MACQUULKA AH:JUVENTUS
L’steiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah
Darmian, Glik, Ogbonna, D’Ambrosio
Cerci, Bianchi, Meggiorini, Santana
Xilli ciyaareedkan ayaa waxaa soo laabtay kulanka ka mid ah kulamada ugu xaafiiltanka badan kooxaha isku magaalada ah ee loo yaqaano Derby della Mole, marka ay kooxda hogaanka u heysa horyaalka ay qaabilaan kooxda kaalinta 14aad ee Torino ciyaar caawa ka dhici doonta Juventus Stadium.
Kooxda martida loo yahay ayaa xilli ciyaareedkan ay soo gaartay guuldaradoodii labaad oo kala kulmeen AC Milan isbuucii hore, waxaana ay labo dhibcood hogaanka kaga hayaan kooxda kaalinta labaad ee Napoli.
Juve ayaa laga yaabaa inay bedel ku sameyso kooxdii ka hortagtay Rossoneri. Martin Caceres ayaa la dhibtoonaya dhaawac canqowga ah, waxaana ay keeni kartaa in Giorgio Chiellini uu buuxiyo dhanka bidix ee seddex daafac.
Ciyaaryahanka kale oo South America ah oo laga yaabo inuu seego kulankaan waa Arturo Vidal. Ciyaaryahanka reer Chile ayaa isna dhaawac uu soo wajahay, waxaana laga yaabaa inuu booskiisa buuxiyo Paul Pogba oo ka garab ciyaari doona Andrea Pirlo iyo Claudio Marchisio.
Kooxda Torino oo lagu naaneeso Granata, ayaa iyagana la filayaa inay bedel ku sameeyaan ciyaartoy badan oo ciyaartay kulankii guuldarada 2-0 ay ka soo gaartay Siena Coppa Italia. Tababare Giampiero Ventura ayaa nasasiiyay inta badan line-upkiisa kulankii Coppa Italia isagoo isha ku hayay kulanka ay la ciyaarayaan kooxda ay ku xafiiltamaan Turin.
Juventus laga badin 12kii kulan ee u danbeysay ee ay la ciyaareen Torino, iyagoo badiyay sideed ka mid ah halka afarta kulanka kale ay barbaro galeen.
Bianconeri ayaa shabaqa ka ilaashatay Granata lixdii kulan ee ugu danbeysay taasoo lagu laabanayo 2002dii.
Giorgio Chielliniayaa goolka guusha dhaliyay kulankii ugu danbeysay ee labada kooxood dhexmara, xilligaasoo Juve ay 1-0 ku badisay 2009kii.
Torino ayaa dhabarka u saarisay Juventus guuldaradii ugu cusleyd abid, markii ay ku garaaceen 8-0 ku dhawaad 100 sanno ka hor sannadii 1913.
Kooxda Granata ma aysan ka badin la Vecchia Signoratan iyo 1995tii laakiin markaas waxa ay ku badiyeen 2-1
Labo Gool Oo Uu El Shaarawy Dhaliyay Oo Ka Caawiyay AC Milan Inay La Degto Kooxda Catania.
AC Milan ayaa u dhaqaaqday kaalinta 7aad ee kala sareynta horyaalka Serie A ka dib markii ay 3-1 ku garaaceen 10 ciyaaryahan oo Catania ah oo marti loogu ahaa Stadio Angelo Massimino.
Labada kooxood ayaa ciyaarta ku dhameystay iyadoo min hal ciyaaryahan uu casaan ka qaatay, laakiin casaankii Catania laga siiyay Pablo Barrientos bilowgii qeybta labaad ee ciyaarta halka Kevin-Prince Boateng uu isna casaan qaatay Milan oo ciyaarta ku hogaamineysa 2-1 xilligii dhamaadka.
Milan ayaa haatan badisay labo kulan oo isku xigta oo Serie A ah markii ugu horeysay tan iyo bishii Aprill.
Catania ayaa gool ku hormartay daqiiqadii 11aad markii Nicola Legrottaglie uu madax gool ugu dhaliyay.
Ciyaarta ayaa isbedeshay bilowgii qeybtii labaad markii Pablo Barrientos casaan la siiyay ka dib jaale labaad oo uu ku qaatay Antonio Nocerino.
Milan ayaana ka faa’ideysatay fursadaas waxaana u barbareeyay ciyaarta ciyaaryahan Stephan El Sharaawy oo shabaqa ku hubsaday kubad uu soo dhigay Kevin-Prince Boateng.
El Shaarway ayaa isna caawiye ka ahaa goolkii uu hogaanka ugu dhiibay Milan Prince Boateng seddex daqiiqo ka dib. Milan ayaana durbadiiba hogaanka ku heysay 2-1 habeen qabow badan.
Waxa ay aheyd goolkii ugu horeeyay Prince Boateng uu dhaliyay ka dib 44 shuudad oo goolka ah oo uu tuuray xilli ciyaareedkan Serie A.
El Shaarawy ayaana ciyaarta hurdo u diray daqiiqad markii ay ka dhineyd shan daqiiqo oo lagu daray ciyaarta, ka dib markii casaan uu Milan ka qaatay Kevin-Prince Boateng.
Torres Oo Loo Qabtay Muddo Bil Ah Inuu Ku Hagaajiyo Ciyaartiisa Hadii Kale Waxaa Bedelaya Taison.
Fernando Torres ayaa heysta muddo bil ah inuu u cadeeyo Rafa Benitez inuu noqon karo ciyaaryahankii uu ahaa markii uu joogay Liverpool.
Chelsea ayaana durbaba ku dhow inay la soo wareegto gooldhaliye reer Brazil ah kaasoo diyaar u ah inuu sannad cusub ku soo bilowdo Stamford Bridge hadii bisha soo socota uusan ka bixin dhibaatada ku habsatay qaab ciyaareedkiisa.
Xiddiga kooxda Metalist Kharkiv Taison ayaa Stamford Bridge joogay habeenkii arbacada isagoo daawaday kulankii goolal la’aanta ee ay la geleen Fulham, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xiddigaasi uu 10 milyan ginni ugu wareegayo kooxda Blues.
24 jirkaan oo ay soo wada ciyaareen xiddiga khadka dhexe ee reer Brazil Oscar ayaa waxaa Chelsea isha la raaceysay xagaagii.
Taison ayaa adduunka ka yaabsaday bilowgii bishaan markaasoo uu ka dhaliyay Europa League gool cajiib ah, taasoo u ekeyd goolkii Marco van Basten uu ka dhaliyay Russia 1988dii.
Arsene Wenger: Waxaan Doonayaa Thierry Henry Iyo Labo Ciyaaryahan Kale Bisha Janaayo.
Arsene Wenger ayaa xaqiijiyay in Arsenal ay dooneyso inay la soo wareegto labo ciyaaryahan bisha Janaayo iyo sidoo kale inay amaah ku soo qaataan mar kale Thierry Henry oo uu markii seddexaad kooxda u ciyaaro.
Gunners ayaa rajadeeda inay ku dhameysato kaalinta 4aad uu haatan mugdi kaga jiraa ka dib markii ay ku bilowdeen sidii ugu xumeyd horyaalka tan iyo intii uu Wenger macalin u noqday, waxaana Emirates Stadium joogta ka noqotay taageerayaasha careysan ee ku ooriya macalinka Faransiiska.
Wenger oo xilli ciyaareedkii 17aad hogaanka u haya Gunners ayaa isagoo u hadlay TV-ga fadhigiisa France yahay Bein Sport waxa uu xaqiijiyay in kooxda ay heysato lacag ay suuqa ku gasho Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
‘Qaboobahan waxaan u shaqeyn doonaa si aad ah sababtoo ah waxaa diyaar noo ah xoogaa lacag ah. Waxaa dhici karta inaan labo ciyaaryahan soo iibsano, laakiin kuuma sheegi karo magacyadooda.
“Amaah aan ku qaadano Henry weli waa suurtogal, laakiin waxaa weli isku dayi doonaa inaan kooxda xoojino mustaqbalkeeda.
“Henry waa tayada aad ku riyooto inaad heysato. Waxa uu leeyahay jir fantastik ah, farsamo fantastik ah iyo maskax fantastik ah oo dhamaantood hal nin la isagu geeyay. Bilowgii mustaqbalkiisa ciyaareed kalsooni ku filan ma uusan heysan, laakiin waxa uu dadka tusay sida uu ciyaaryahan weyn u yahay.”
Ciyaartoyda ay Arsenal ceyrsaneyso ayaa waxaa ka mid ah da’ yarka Crystal Palace Wilfried Zaha iyo weeraryahanka Schalke Klaas-Jan Huntelaar.
Vicente Del Bosque Oo Ka Filanaya Kulanka Madrid Derby Ee Isbuucaan Ciyaar Madadaalo Leh.
Tababaraha xulka Spain Vicenre del Bosque ayaa jeclaan lahaa inuu arko ciyaar fiican oo madadaalo leh marka ay Real Madrid iyo Atletico Madrid qoorta isku galayaan isbuucaan, isagoo aaminsan in Atletico ay xoogan tahay xilligan uu macalin u yahay Diego Simeone.
Atletico Madrid ayaa ku riyaaqeysa xilli ciyaareed weyn, waxaana ay haatan kaalinta labaad kaga jiraan La Liga iyagoo seddex dhibcood ka hooseeya kooxda hogaanka heysa ee Barcelona, waxaana ay sideed dhibcood ka sareeyaan kooxda kaalinta seddexaad ee ay isku magaalada yihiin ee Real Madrid.
Inkastoo Atletico ay rikoor xun ka heysato kulamada Los Blancos, hadana Del Bosque ayaa rajo ka qaba in ciyaarta aan lagu kala bixi doonin bilowgaba sidii dhacday inta badan ciyaarihii u danbeeyay.
“Atletico Madrid oo uu hogaaminayo Simeone waxa ay yihiin koox aad u fiican. Waxaan rajeynayaa inay ciyaar fiican dhexmari doonto iyaga iyo Real Madrid” ayuu yiri Del Bosque sida ay qortay Marca.
“Waxaan rajeynayaa in ciyaarta aan lagu kala bixi doonin qeybaheeda hore, sida dhacday sannadihii la soo dhaafay.
“Atletico waa soo kuftay oo kacday sannadahan. Laakiin haatan oo uu Simeone macalin u yahay hal wado ayay ku taagan yihiin.”
Tababaraha Brazil Scolari Oo Durbaba Qalad Ku Dhacay Saacado Ka Dib Markii Uu Shaqada Qabtay.
Luiz Felipe Scolari ayaa durababa muran dhexda ka garay kaliya saacado markii uu qabtay xulka qaranka Brazil shalayto isagoo sheegay in ciyaartoyda aan xamili karin cadaadiska shaqada xulka inay tahay inay u shaqeeyaan Banco do Brasil.
Banco do Brasil SA, waa bankiga ugu weyn wadanka Brazil hanti ahaan, waxaana hadalka Scolari ay ku tilmaamen inuu yahay mid nasiib darro ah, halka ururka shaqaalaha ganacsiga wadanka ee loo yaqaano Contraf ay ku tilmaameen in hadalkiisa uu ahaa ixtiraam la’aan.
“Banco do Brasil, iyo dhamaan shacbiga Brazil waxa ay u rajeynayaa Luiz Felipe Scolari nasiib wacan shaqadiisa xulka qaranka Brazil” ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay bankiga.
“Si kastaba, Banco do Brasil waxa ay ka qoomameyneyso nasiibdarrada hadalka uu yiri Scolari.. inagoo ku faaneyna inay nala shaqeeyaan 116 kun shaqaale oo xiran midabada bankiga islamarkaana u adeega shacbiga ku xiran Bankiga.”
Waxaa lagu soo waramayaa in 1200 shaqaale ay bil kasta sababo caafimaad nasasiino u helaan madaama cadaadis uu ka soo karo shaqada Bankiga taasoo ka horimaneysa hadalka Scolari ee ah in ciyaaryahankii aan cadaadis u dulqaadan karin inuu shaqo u doonto Bankiga.
“Felipao kaliya ixtiraam la’aan uma uusan soo bandhigin shaqaalaha Bankiga laakiin sidoo kale waxa uu soo bandhigay aqoon yaradiisa la xiriirta sida uu u shaqeeyo nidaamka dhaqaalaha” ayuu Contraf iyadana warbixin ay soo saartay ku sheegtay.
“Waxaan rajeyneynaa inuusan laheyn aqoonyari kubada cagta ah oo la mid ah midka uu ka qabo sida ay u shaqeeyaan bankiyada” ayay hadalkooda raaciyeen.
Bankiga ayaa xilli danbe sheegay in Scolari uu la soo xiriiray islamarkaana uu raaligelin ka bixiyay hadalkiisa.
Halyeeyga Reer Holland Edgar Davids Oo Doonaya Inuu Macalin U Noqdo Kooxdiisii Hore Ee Juventus.
Halyeeyga reer Holland Edgar Davids ayaa sheegay inuu ku faraxsanaan lahaa hadii Antonio Conte uu ka xadi lahaa shaqada kooxda Juventus.
39 jirkaan oo haatan shaqo tababare iyo ciyaaryahan isku ah ka haya kooxda Ingariiska ee heerka hoose ee Barnet, ayaa shaaca ka qaaday in hadii uu fursad u helo inuu bedelo saaxiibkiisii hore ee Juventus inuusan ka labalabeyn doonin inuu qabto shaqadaas.
“Conte waa tababare aad u fiican, laakiin booskiisa kursiga keydka waan ka xadi lahaa” ayuu Davids u sheegay Tuttosport.
“Hadii Juve ay i soo waci laheyd, waxaan dhihi lahaa haa. Aad ayay uga sahlan tahay in tababare loo noqdo koox weyn halkii loo noqon lahaa koox yar. Fiiri Frank Rijkaard. Sparta Rotterdam musiibo ayay ku noqotay, ka dib waxa uu aaday Barcelona waxaana uu ku guuleystay wax walba.
“Conte la mid ayuu ahaa. Muxuu u qabtay Atlanta? Waxba, haatan shaqo fiican ayuu qabanayaa.”
Davids ayaa ka soo ciyaaray Turin intii u dhaxeysay 1997dii ilaa 2004, waxaana uu qirtay in hamigiisa uu yahay inuu tababare ka noqdo koox Talyaani ah oo ka ciyaarta Serie A.
“Haatan waxaan ku riyaaqayaa waqtigeyga Barnet ee tababare ahaan, laakiin waxaan qabaa inaan ka shaqeyn karo Serie A. Macalimiinteydii hore labo hadaan ka magacaabo Louis van Gaal iyo Marcelo Lippi, dhamaantood wax ayay i bareen.”